थप कडाई गर्दै एक हप्ता लम्ब्यिाइयो निषेधाज्ञा, के गर्न पाइन्छ, के पाइँदैन ? | सुप्रीम खबर
थप कडाई गर्दै एक हप्ता लम्ब्यिाइयो निषेधाज्ञा, के गर्न पाइन्छ, के पाइँदैन ?
२०७८ बैशाख २१, मङ्लबार, ७: १५PM
उपत्यकाका ३ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुको मंगलबार बसेको बैठकले जारी निषेधाज्ञालाई थप कडाई गर्ने निर्णय गरेको छ । कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्दै गएपछि गत बैशाख १६ गतेदेखि जारी निषेधाज्ञालाई बैशाख २९ गतेसम्मका लागि लम्बाइएको छ ।
यसअघि जारी गरिएका सम्पूर्ण सवारी पास खारेज गर्ने । अति आवश्यक अवस्थामा वाहेक जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट सवारी पास जारी नगर्ने । जारी निषेधाज्ञामा संक्रमण दर घट्नुको साटो झन् बढिरहेको छ ।
अघिल्लो लेखमानेपालमा एकै दिन ५५ कोरोना संक्रमितको मृत्यु
अर्को लेखमापछिल्लो २४ घण्टामा सात हजार ६६० जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि